Suldaan Nayruus | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Shalay galab ayaan waxaan soo raacay Bajaaj. Waxaa waday Bajaajtaasi nin garmadow ah oo markaasi jaad takhsiinnaa. Ka warrama haddii ay ishelaan nin war jecel iyo nin marqaansan? Sheeko qiso iyo qosol isugu jirtay ayaannu dhex dabaalannay. Annaga oo ay noo baxayso ayaa waxaa gadaal nooga yimid gaari Cabdibile ah oo ay ku dhoobnayeen askar hubaysan. Haddii aad Soomaaliya joogto, ma Cabdibile ayaa la hor socon karaa? Marka hoonkiisa la maqlo ayaa la kala haadaa! Cabdibilihii foori ayuu intaa nala dabajoogaa, annaguna lama soconno oo adduun kale ayaannu ku jirnaa. Sidii uu noo daba socday oo uu sheellare iyo …
Dhibka kala haysta xirfadlayda iyo looshaqeeyeyaasha! Waxaa jira eray la yiraaho `LAKUKA` oo caan ka ah dalka Soomaaliya, waxaana eraygan laga soo gaabiyey: LA: la qabso KU: ku qabso KA: ka qabso Tusaale; ganacsade ama NGO-le ka dhex waayey qaraabadiisa qof leh xirfad uu markaasi u baahan yahay, ayaa xifadle uu ka warhelay in uu leeyahay aqoontaasi, inta uu raadiyo, shaqo siinayaa. Marka uu shaqada soo galo, ayaa waxa uu u keenayaa qof qaraabadiisa ah oo uu horay uga soo dhaadhiciyey in uu xirfadlahan ka barto xirfadda shaqada, waxa uuna ku soo leeyahay, shadaqa LAQABSO! Qofkii waxa uu soo …
Waa baa waxaa jiri jiray, wiil iyo gabar muddo dheer oo ay isjeclaayeen ka dib, go’aan ku gaaray in ay isguursadaan. Kolkii ay inta ismehersadeen, loo mashxadaray, ayey horay ka aqal galeen. Waa lammaane isku oommanaaye, waxa ay isla qaateen in, ilaa bil, inta ay ruuxaanta ku kacsan iska cuudinayaan, aysan aqalka qofna ka furin – xitaa haddii ay waaliddiintoodii yihiin. Iyaga oo sidii isugu hawllan, baa toddobaad ka dib, waxaa la soo garaacay hoygii. Wiilkii baa inta booday, waxa uu ka fiiriyey daldaloolka albaabka dadka soo gaaracaya, mise waa labadiisii waalid. Isla markiiba waxaa ku oo dhacay ballantii …
Beri baa waxaa jiray nin sheekh ah oo qaalli ka ahaa magaalo ka mid magaalooyinka Soomaaliya. Magaalada uu sheekhu ka ahaa qaalliga, waxaa deggannaa qabiillo badan uu qabiilkiisu ka mid ahaa. Sheekhu waxa uu ahaa nin caaddil ah oo dadka u dhexeeya oo sida Eebbe faro aanan dhanna uga leexan. Maalinta qof qabiilkiisa ka mid ah iyo cid kale wax soo dhex maraan oo loo yimaado sida diintu ay qabto ayuu mariyaa isaga oo aan cidna u eexan. Marar badan oo dad qabiilkiisa ka mid ah iyo Soomaali kale wax soo dhex mareen ayuu marsiiyey sida diintu qabto. Qabiilkiisa oo …
Nin baa nagu yiri “Mar dambe in aan Soomaalinimo wax ka sokeeya sheegan baan go’aan ku gaarey!”. Meel biibato ah ayaan isugu nimid, waxaana meesha lagu hayey fadhi-ku-dirir iyo qabiillo sheeg-sheegid. Ninkaan ayaa soo boodey markaas buu qiso yar nooga sheekeeyey. Wuxuu yiri aniga oo Liibiya jooga ayaa meel maqaaxi ah aniga oo kasii baxayey, waxaan gadaashey ka maqlay “Waryaa.. Waryaa..” markaas ayaan soo jeestey mise waa nin aan kala garan waayey in uu Itoobiyaan yahay ama Eriteriyaan yahay ama Canfar yahay. Wuxuu igula hadlay Af-carabi, wuxuuna I yiri, waxaad tahay Soomaali, laakiin qoladeed ka tahay, wuxuu ahaa nin …
Ereygaan “Federalism” horey uma aqoon, laakiin markii aan arkey sida ay Soomaalidu u calmatey ayaan dib-u-eegey. Waxbaa iiga baxay. Waxaan ogaadey – garashadeyda – in sida aan u wadno iyo siduu yahay, yihiin KAAF IYO KALA DHEERI. Puntland waxay tiri, meegaarka yagu waa inta heybta yadu degto. Qolada Galmudug ee Gaalkacyo wax ka degta, waxaa looga caalwaayey in ay Puntland raacaan, oo waxay qeyb ka mid ah Gaalkacyo la soo aadeen Dhuusamareeb. Qolada degta Guriceel, waxay leeyihiin Degmada Matabaan qabiilkeedey raaceysaa. Qabiillo Muqdisho jooga ayaa ku doodaya in degmooyinka Shabeellada Hoose qaar la raacsiiyo Shabeellada dhexe, maadaama ay isku …